प्रेम बिवाह गरि घर बसालेकी निरुले अस्पतालमै लीईन अन्तिम सास, छोराछोरीलाई टुहुरो बनाएर गाईन ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारप्रेम बिवाह गरि घर बसालेकी निरुले अस्पतालमै लीईन अन्तिम सास, छोराछोरीलाई टुहुरो बनाएर गाईन !
प्रेम बिवाह गरि घर बसालेकी निरुले अस्पतालमै लीईन अन्तिम सास, छोराछोरीलाई टुहुरो बनाएर गाईन !
November 2, 2020 admin समाचार 7775
आखिर ‘छक्का पन्जा’ टिमबाट निकालिएका हुन् जितु ? यस्तो हल्ला चल्नुको रहस्य यस्तो (भिडियो हेर्नुहोस )
१० महिनाको दुधे नानी र अपाङ्ग श्रीमानलाई छोडेर श्रीमती अर्कैसंग फरार, बच्चाको बिचल्ली (भिडियो)
November 24, 2020 admin समाचार 3084
काठमाडौ । महोत्तरीमा एक ६ वर्षकी बालिका निधन भएको अवस्थामा फेला परेपछि अवस्था विग्रिएको छ । स्थानिय निकै आक्रोशित भएका छन् । विहानै देखि बर्दिबासमा स्थानियले आन्दोलन गरेका छन् । ६ वर्षकी बालिका माथि नराम्रो
December 7, 2020 admin समाचार 1703
नायिका श्वेता खड्काले मंसिर २२ गतेको लगनमा दोस्रो विहे गरेकी छिन्। प्रेमी विजयन्द्रसिंह रावतसँग गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा श्वेताले विवाह गरेकी हुन्। सिमित साथी र आफन्तमाझ श्वेता र विजयन्द्र स्वयवको हिन्दू परम्परा अनुसार विवाह भएको हो।
तिहारका ५ दिन यति काम राम्रो सँग गर्नुहोस् धनको अभाव जीवनभर हुदैन (भिडियो सहित)
November 12, 2020 admin समाचार 3676
तिहार हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको दशैं पछिको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो । यो पर्व कार्त्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारको नामले शुरु भएर कार्त्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथिको भाइटीकासम्म ९पाँच दिन० मनाइन्छ । पाँच दिनसम्म मनाइने